टच बारको साथ तपाईंको म्याकबुक प्रो बेच्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? एप्पल यो पछिल्लो कदम सिफारिश गर्दछ म म्याकबाट हुँ
यदि २०१ 2016 पछि तपाईंसँग म्याकबुक प्रो छ र तपाईंसँग टच बार छ भने, तपाईंको म्याकमा एकल प्रोसेसर छैन, तर दुई। कमसेकम २०१ 2016 र २०१ 2017 मोडेलमा टच बारसँग (हामी भविष्यमा के हुन्छ देख्नेछौं) तपाईंको म्याकको केन्द्रीय चिपबाट छुट्टै चिप रहेको छ। यस कारणका लागि, हामीले बेच्ने वा ट्रान्सफर गर्दा हामी लिने कदमहरू हामी लिन्छौं। टेक्नोलोजिकल उपकरणहरू र स्पष्ट रूपमा हामी हाम्रो कुनै पछाडि कुनै ठाउँ छोड्न चाहान्छौं, यस पटक हार्ड ड्राइभ पूर्ण रूपमा मेटाउन पर्याप्त छैन। एप्पल सिफारिस गर्दछ कि तपाईं निम्न गर्नुहोस्।
त्यसकारण, जब टच बार जानकारी सlects्कलन गर्दछ, हामीले टर्मिनलबाट केहि कार्यहरू गर्नुपर्नेछ, यो सुनिश्चित गर्न कि व्यक्तिगत जानकारी यात्रा गर्दैन हाम्रो पुरानो टोलीमा। सिद्धान्तमा, यो डाटा सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको छ सुरक्षित एन्क्लेभ। यदि तपाईं एप्पल पृष्ठमा टच बारबाट जानकारी कसरी मेटाउने भन्ने बारेमा जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले एक भन्दा बढि फेला पार्नुहुने छैन गाईड एप्पल बार प्रयोग गर्न। यसको सट्टामा, तपाईं जहिले पनि गाईडमा जान सक्नुहुन्छ समर्थन जसले हामीलाई टर्मिनलबाट केहि चरणहरू लिन र टच बारबाट जानकारी मेटाउन आमन्त्रित गर्दछ। यसो गर्नको लागि, तपाईंले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
तपाईं आफ्नो म्याकबुक प्रो बेच्दा वा दिनु अघि टच बार द्वारा भण्डार गरिएको कुनै पनि जानकारी मेटाउन सक्नुहुन्छ।
पहिले, म्याकोस रिकभरीबाट सुरू गर्नुहोस्: तपाईको किबोर्डमा कमाण्ड-आर थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस् तपाईको म्याक खोल्नको लागि पावर बटन थिचेर, वा तुरुन्तै तपाईको म्याक पुनःसुरु गर्न थाल्दा।
जब म्याकोस युटिलिटीज विन्डो देखा पर्दछ, मेनु पट्टीबाट उपयोगिताहरू> टर्मिनल छनौट गर्नुहोस्। टर्मिनलमा यो आदेश टाइप गर्नुहोस्: xartutil --erase-all
ESC थिच्नुहोस्, हो टाइप गर्नुहोस्, जब तपाईंलाई सोधेको हो कि भनेर निश्चित हुनुहुन्छ भने, र ESC फेरि थिच्नुहोस्। अन्तमा, टर्मिनल छनौट गर्नुहोस्> टर्मिनलबाट निस्कनुहोस् र अर्को चरणमा जानुहोस्।
यदि तपाईंले टच बारको साथ आफ्नो म्याकबुक प्रो बेच्नुभयो र तपाईंले यी चरणहरू गर्नु भएको छैन भने केही पनि हुँदैन, तर त्यसो गर्न दुख दिदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » टच बारको साथ तपाईको म्याकबुक प्रो बेच्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ? एप्पल यो पछिल्लो कदम को सिफारिश गर्दछ